Tiknoolajiyadda Si Loogu Guul Gelyo Iibka | Martech Zone
Tiknoolajiyadda Ku-Meel-Gaarka Iibka
Isniin, April 15, 2013 Wednesday, May 21, 2014 Jenn Lisak Golding
Adduunyada maanta, tiknoolajiyada iyo kaabayaasha iibku way wada socdaan. Waa lama huraan inaad raadineyso waxqabadyada rajadaada si aad ugu qalanto hogaan kulul ama jilicsan. Sidee rajadu ula falgalayaan astaantaada? Ma waxay la falgalayaan sumaddaada? Qalab noocee ah ayaad adeegsaneysaa si aad ula socoto tan?
Waxaan la shaqeynay annaga soo-jeedinta soo-jeedinta iibka, TinderBox, si loo sameeyo infographic ku saabsan aaladaha iyo hababka kala duwan ee shirkaduhu u adeegsadaan inay u qalmaan oo ay ula socdaan raadadka. In kasta oo masraxa iibku is beddelayo, haddana weli waxaa jira wajiyo kala geddisan inta lagu jiro wareegga iibka: Suuqgeynta & Iibinta, Sugitaanka, U qalmidda, Xaqiijinta, Gorgortanka, iyo Gudbinta. Nidaamku ma noqon karo mid toosan, laakiin talaabooyinkani waxay muhiim u yihiin xidhitaanka iibka.
Qalabkan keebaa adeegsaneysaa inaad gaabinayso wareegga iibintaada? Sideed ugu abuureysaa fursado kooxdaada marka loo eego kaalmaynta iibka? Adeegsiga qalabka saxda ah ayaa kaa caawin doona inaad gaarto "dahabka iibka."
Jenn Lisak Golding waa Madaxweynaha iyo Maamulaha Guud ee Istaraatiijiyada Safiirada, oo ah hay'ad dijitaal ah oo isku dhafan xogta hodanka ah iyo khibrad dhab ah oo khibrad leh si ay uga caawiso sumadaha B2B inay ku guuleystaan ​​macaamiil badan oo ay ku dhuftaan suuqgeynta ROI. Istaraatiijiyad abaalmarin ku guuleysatay, Jenn waxay soo saartay Qaab-dhismeedka Safayl-nololeedka: qalab xisaabeed caddeyn ku saleysan iyo naqshadeynta maalgashiga suuq geynta sare.
Infographics iyo Video: Sahaminta Habdhaqanka Raadinta ee Internetka
Saldhigga Bilaashka: Macluumaadka Dadka, Meelaha ama Waxyaabaha
Apr 17, 2013 at 6: 54 AM
Qalabkan kee ayaad adeegsaneysaa si aad u gaabinto wareeggaaga iibka? Sideed ugu abuureysaa fursado kooxdaada marka loo eego kaalmaynta iibka? Adeegsiga qalabka saxda ah ayaa kaa caawin doona inaad gaarto "dahabka iibka."
Anigu intaas ka badan waan kula heshiin kari waayey. Adeegsiga qalabka saxda ah - waana inaan dhaho iyaga oo si wax ku ool ah u isticmaalaya - waxay kaa badbaadin kartaa waqti badan oo shaqadaada ka dhigi kara mid wax ku ool ah. Si kastaba ha noqotee, dhibaatada tan ayaa ah in dad badani aysan isticmaali karin qalabkan ama ay u isticmaalayaan si aan fiicnayn.
Apr 17, 2013 at 3: 08 PM
Waad ku mahadsantahay faalladaada, Anne! Sidoo kale waan kugu raacsanahay Waxaan u maleynayaa adeegsiga aaladaha wax ku oolka ah inay dhibaato tahay maalmahan - dadku way ku mashquulaan ama waqti uma qaataan inay wax bartaan. Sidaa darteed, waxaad waayi kartaa fursado badan oo kala duwan.
Apr 18, 2013 at 2: 09 AM
ya jenn isticmaalka qalabka si wax ku ool ah waa heshiis weyn hadda, sharaxaad fiican tanq
Apr 18, 2013 at 3: 09 AM
Waan jeclahay sida DK New Media waa shuraako la ah Tinderbox-ka oo xog-uruurintu waxay soo jeedineysaa Tinderbox 300% in ka badan aaladaha kale ee halkan ku yaal. Waxaan la yaabanahay imisa qalab kale oo halkan yaal ayaa ku xidhan DK New Media iyo Tinderbox. Miyay aad u badan tahay in la rajeeyo aragti dhammaystiran oo ku saabsan suuqgeynta / iibinta barnaamijyada iibkeena?
Brian Cabaas (@abdiwahid_abdi)
Sep 22, 2014 at 11: 16 AM
Waxaan jeclahay infographic ah, Jenn. Si aad u wanaagsan ayaa loo qabtay - uguyaraan aragtida qof kujira labada siloos ee silsiladda dalabka. Waan ku raacsanahay faallooyinka kor ku xusan sidoo kale - dadku waxay ka dhacayaan marxaladda korsashada ee qalabkan.
Sep 22, 2014 at 11: 22 AM
Mahadsanid, Brian! Waan ku faraxsanahay fikirkaaga. Waxaan u maleynayaa inay jiraan qalab aad u tiro badan oo halkaa ka jira oo ay adag tahay in la ogaado waxa aad raadineyso ama waxa ay tahay in dhab ahaan loo isticmaalo. Taasi waxay noqon doontaa wax muhiim ah oo laga fekero marka laga eego dhinaca calaamadeynta, halkaas oo shirkaduhu u baahan yihiin inay awood u yeeshaan inay si hufan u sharxaan waxa ay u isticmaali karaan / u isticmaali karaan. Iyo, dhinaca kale ee lacagtaas, adeegsadayaashu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxay rabaan sidoo kale si ayan ugu maal gashan wax aan taageeri doonin hadafkooda marka hore.